कोलेस्ट्रोल | Ratopati
अण्डाको फण्डाः कोलेस्ट्रोल बढ्छ, मुटु रोग गराउँछ भन्ने कुरा कति साँचो–कति झुटो ? access_timeमाघ २, २०७६
अण्डा ! सम्भवतः यस पृथ्वीमा पाइने खाद्य पदार्थहरुमध्ये सबैभन्दा बढी पोषणयुक्त खानेकुराहरुमध्येका एक । फगत एउटा कोषलाई पूर्ण रुपमा चल्लामा परिणत गराउनको लागि आवश्यक सबै जीवनदायी तत्त्वहरुले भरिपूर्ण हुन्छ एउटा सिंगो अण्डा । एउटा उसिनेको अण्डामा हामीलाई दै...